Rarotonga dia manokatra ny rafitry ny seranam-piaramanidina
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Rarotonga dia manokatra ny rafitry ny seranam-piaramanidina
Nilaza ny talen'ny tompon'andraikitra Rarotonga Authority Joe Ngamata momba ity seranam-piara-manidina any amin'ny Nosy Cook ity, tena faly izy fa vita ny asa amin'ny rafitry ny fitaovana vaovao mitentina $ 2 tapitrisa an'i Rarotonga International Airport.
Ny fametrahana ny rafitra mihitsy dia vita tamin'ny herinandro lasa teo ary tonga ny alakamisy lasa teo ny fiaramanidina fanaraha-maso manokana avy any Nouvelle-Zélande mba hanao fanandramana farany - rehefa nahavita asa mitovy amin'izany tao amin'ny seranam-piaramanidina Aitutaki ny zoma.
Rehefa niresaka tamin'i Ngamata ny marainan'ny alatsinainy ny CINews dia mbola miasa ny sidina fitsapana, manidina sy mivoaka amin'ny làlambe miaraka amina injeniera iray eny an-tsambo mizaha fa ny rafitry ny fiakarana dia mamindra angon-drakitra marina amin'ny fiaramanidina.
"Efa an-taona maro no niandrasantsika an'io," hoy i Ngamata momba ny rafitra vaovao, izay nantenainy fa hodiovina tanteraka ao anatin'ny iray andro.
“Zava-dehibe ho antsika io rafitra fampitana fitaovana io - heverinay ho ampahany amin'ny zava-bita io seranam-piaramanidina io. Manaraka ny haitao sy ny teoria tsara indrindra amin'ny teknolojia ho an'ity karazan-javatra ity.
"Io no tetik'asa lehibe indrindra nananantsika nandritra ny fotoana kelikely - ny farany nanananay tamin'ny 2010 dia ny terminal."
Ny vidin'ny tetik'asa dia vola mitentina 2 tapitrisa dolara monja, naloan'ny teti-bolan'ny Fahefana Aéroport. Ny manampahefana koa dia nahavita nitazona ny vola lany tamin'ny fiandrasana mandra-pahatongan'ny fiaramanidina fanamafisam-peo avy any Nouvelle-Zélande nanao fizahana isan-taona fanaon'ny Pasifika, fa tsy nitondra azy manokana ho an'ny fitsapana rafitra vaovao fotsiny.
Raha vantany vao vita ny fitsapana, dia hiverina any Nouvelle-Zélande ny sidina fanaraha-maso sy ny mpiasa ao aminy.
Ny fanoloana ny iray izay mihoatra ny 30 taona, ny rafitry ny fitaovana vaovao dia manana fe-potoana 15 taona ary haverina hamboarina indray isan-taona.
Amin'ny faran'ny androm-piainany dia nilaza i Ngamata fa ny rafitra fiantsonana vaovao dia azo antoka fa hosoloina teknolojia miorina amin'ny satelita.
"Nihevitra tokoa izahay fa ny rafitra satelita vaovao dia efa nahatratra an'io ary tsy tokony hametraka azy izahay - fa mbola ampiasain'izy ireo eraky ny toerana ihany io," hoy ny fanazavany.
“Teknolojia taloha ireo, fa ny maodely farany an'ny haitao taloha. Ireo vaovao izay vao manomboka mivoaka, vao manomboka apetraka amin'ny toerana sasany, dia zavatra antsoina hoe GBAS (Grement-based Augmentation System). Miorina amin'ny satelita daholo izany.
“Fa raha vao vita ity kalibr ity ity dia tsy mikasika azy intsony isika mandritra ny 15 taona manaraka.”
Ny tetik'asa ho avy manaraka ho an'ny seranam-piara-manidina dia mitaky ny fanavaozana ny jiro fihodinana taloha avy amin'ny jiro mankany amin'ny LED, izay mitentina eo amin'ny $ 250,000.
"Fanatanjahan-tena somary lafo io raha atao," hoy i Ngamata. “Fa rehefa avy nanova azy ireo ianao dia mora vidy kokoa ny LED. Ary maharitra kokoa izy ireo. ”
Nanampy i Ngamata fa nanantena izy fa ny fanovana ny jiro LED dia hametraka volavolan-dalàna mitentina 36,000 volana isam-bolana.
Tsy misy fizahan-tany any Tahiti: mpitsidika 76,906 XNUMX amin'ity taona ity